သင့်ရဲ့ အဖွဲ့ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ? | Mycanvas
သင့်ရဲ့ အဖွဲ့ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲ?
တူညီသောရည်မှန်းချက်တစ်ခုအတွက် အတူတကွလုပ်ဆောင်နေကြသော သူများသည် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးပြီး ခက်ခဲသော အလုပ်များကို ပြီးမြောက်ရန်အတွက် အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ အားလုံးသည် ဘုံတူညီသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေါ်တွင် အတူတကွ ရောက်ရှိလာကြပြီး သတ်မှတ်ထားသော ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်အောင် ကြိုးပမ်းကြသည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီသည် တူညီသော ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် ပန်းတိုင်ဆီသို့ ဦးတည်သော ယူနစ်တစ်ခုတည်းအဖြစ် လုပ်ဆောင်သောအခါတွင် အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းသည်။
အသင်းတိုင်းသည် ကောင်းကောင်းမစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အသင်းသားများအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရန် လူတစ်ဦးချင်းစီကို ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။
● အဖွဲ့၀င်များသည် အရသာ၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊ နှစ်သက်မှု၊ လိုအပ်ချက်နှင့် သဘောထား တူညီနိုင်ခြင်းမရှိပါက တူညီမှုတစ်ခုတော့ရှိရမည်။
တစ်ဦးချင်း တူညီသော နောက်ခံများမှ ဖြစ်သင့်ပြီး ကွာဟချက် အလွန်အကျွံကို ရှောင်ရှားသင့်သည်။ အဖွဲ့၀င်များသည် ၎င်းတို့၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် အထူးပြုမှုကို အာရုံစိုက်ကာ ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်အတွက်ကြောင့် အသင်းမဖွဲ့ပါနဲ့။ နည်းပညာပိုင်းအရ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသူတစ်ဦးသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် အမြဲတမ်း ရှုပ်ထွေးမှုများ ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
● အသင်းသားများအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းနားလည်ရမည်။
လူတစ်ယောက်သည် စကားပြောကောင်းသူဖြစ်နိုင်သော်လည်း စာရေးခြင်း သို့မဟုတ် စာရေးဆက်သွယ်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီသည် တင်ဆက်မှုတွင် ထူးချွန်သော်လည်း စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော တင်ဆက်မှုအနုပညာကို ဖန်တီးနိုင်ခြင်း မရှိပေ။ လူတစ်ဦးချင်းစီကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ရန် အလွန်အရေးကြီးပြီး ၎င်းတို့၏စိတ်ပါဝင်စားမှုနှင့် ၎င်းတို့၏အရည်အချင်းနှင့် အထူးပြုမှုအလိုက် တာဝန်များကို ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထူးချွန်သော မားကတ်တင်းကျွမ်းကျင်မှုရှိသော လူတစ်ဦးသည် စားပွဲတင်အလုပ်တစ်ခုတွင် ဘယ်သောအခါမှ စိတ်ဝင်တစား ရှာမတွေ့ဘဲ သူ၏အကောင်းဆုံးမှာ မည်သည့်အခါမျှ ထွက်ပေါ်လာမည်မဟုတ်ပေ။ မည်သူ့ကိုမျှ အသင်း၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန် မည်သည့်အခါမျှ အတင်းအကြပ် မတိုက်တွန်းပါနှင့်။ တစ်ဦးချင်းကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်။
● အသင်း၏ ရည်မှန်းချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ရမည်။
အဖွဲ့၏ ရည်မှန်းချက်ကို အသင်းသားတိုင်းနှင့် မျှဝေရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ထံမှ မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖွဲ့၀င်များ အတွက် အလွန်ရှင်းလင်းရမည်။ အစွမ်းကုန် စွမ်းဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက် သူတို့ဘာတွေ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
● သင့်အဖွဲ့၀င်များကြား ထိရောက်သော ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ပါ။
ပွင့်လင်းသောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ဆွေးနွေးမှုများတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ရန် အဖွဲ့၀င်များကို အားပေးပါ။ အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို ဖိတ်ကြားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးရန် အစည်းအဝေးခန်းကို ဦးစားပေးပါ။ မည်သူမျှ လျစ်လျူရှုခြင်း သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ခြင်းမခံရစေရန် အဖွဲ့၀င်များအားလုံးနှင့် အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါက အမြဲတမ်း ပိုကောင်းပါသည်။
သင့်အဖွဲ့တွင် အဆိုးမြင်စိတ်များ မ၀င်ရောက်ပါစေနှင့်။ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ရွေးချယ်ပါ။ အသေးအမွှားကိစ္စများကို ရှောင်ရှားပြီး အနည်းငယ်ပို၍ ညှိယူသင့်သည်။ အရာတိုင်းဟာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
● အဖွဲ့များအတွင်း အမျိုးမျိုးသော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပွဲများကို မြှင့်တင်ရမည်။
အဖွဲ့သားများသည် ရုပ်ရှင် သို့မဟုတ် နေ့လယ်စာစားရန် အပြင်ထွက်ပါက အလုပ်တွင် မည်သည့်အခါမျှ ဒုက္ခရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစား အသင်းသားများကြားတွင် နှောင်ကြိုးကို ခိုင်ခံ့စေသည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီသည် ဤနည်းဖြင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နီးကပ်လာပြီး အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ လူတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုသိသည်။ အသင်းသားတွေကို နွေးထွေးတဲ့အပြုံးနဲ့ နှုတ်ဆက်ဖို့ အမြဲသတိရပါ။
● ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို ဂရုတစိုက် ခန့်အပ်ရမည်။
ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးသည် လူတိုင်းက သူ့အား အကြံဉာဏ်နှင့် လမ်းညွှန်မှုပေးရန် မျှော်ကိုးနေသင့်သည်။ အဖွဲ့တွင် အနှစ်သက်ဆုံး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သည် မိမိအဖွဲ့၀င်များထဲမှ အကောင်းဆုံးကို ထုတ်နုတ်ပြီး လူတိုင်းနှင့် တန်းတူဖြစ်ရမည်။ ထက်မြက်ပြီး လိမ္မာပါးနပ်သူဖြစ်ရမည်။ သူသည် လူတစ်ဦးချင်းစီအား အခါအားလျော်စွာ တွန်းအားပေးပြီး ဘက်မလိုက်သူဖြစ်ရမည်။ သင့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကို ဘယ်တော့မှ အရှက်မခွဲပါနဲ့။
● တစ်ဦးချင်းစီထံမှ တုံ့ပြန်ချက်ရယူရန် အရေးကြီးပါသည်။
သင့်အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့သားများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လစဉ်စစ်ဆေးပါ။ သူအလုပ်ပျော်နေလား မပျော်ဘူးလားဆိုတာ နားလည်ဖို့ အဖွဲ့ဝင်တိုင်းနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။ အသင်းဝင်များအကြား ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ယှဉ်ပြိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပါ။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အရာတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့လျှင် ချီးကျူးပါ။ သူ့ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆုချပါ။
● အမြင့်ဆုံးရလဒ်ထွက်ရှိရန် အဖွဲ့ရှိ အဆင့်အားလုံးတွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရမည်။
အဖွဲ့သားများသည် အစည်းအဝေးများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများကို အချိန်မီရောက်ရှိရမည်။ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုများရှိသောအခါတွင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များသည် အဖွဲ့ထံမှ အလွယ်တကူ ရနိုင်ရမည်။